Isbaanish - ALinks
Maqaallada ku saabsan Spain
Hel Fiiso Isbaanish Schengen ah !! Raac Talaabooyinkan !!
April 29, 2020 Karuna Chandna Spain, fiisada
Haddii aad qorsheynayso inaad soo booqato Spain waa inaad u baahan tahay fiiso. Waan arki doonnaa sida aad u dalban karto dal ku galka Spain. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo fiiso oo kala duwan oo mid ayaa dooran kara si waafaqsan. Sidaad u dalbankarto
Sidee shaqo looga heli karaa Spain? Halkan Ogow !!
April 11, 2020 Karuna Chandna shaqo, Spain
Spain waa mid ka mid ah meelaha soo jiidashada leh. Waxay kugu jiidanaysaa khamrigeeda macaan iyo meel walba. Way fududahay in lagu raaxeysto qorraxda badda Mediterranean, shaqo helid, iyo u guurista halkan. Haddii qof ku noolaa Spain laba sano oo uu sameeyo
Sidee iyo Maxaa Loo Bartayaa Jaamacadda Isbaanishka?
March 13, 2020 Antika Kumari Spain, waxbarasho
Isbaanishka, hey'adda maaraynta waxbarashada waa "Wasaaradda Waxbarashada". Isbaanishka "Sharciga Waxbarshada" ee sameeya kontaroolida.Kani waxaa si weyn u taageera dowladda Spain. Barashada jaamacadda Isbaanishka shaqo culus oo badan maahan. Halkan
Bangiyada Wanaagsan iyo Adeegyada Maaliyadeed ee Isbaanishka
March 12, 2020 Antika Kumari lacag, Spain
Dulmarka guud ee Bangiyada Spain Isbaanishka awooda lacageed ee dhexe waa Banco de España, oo u shaqeysa kormeeraha qaran ee bangiyada Spain. Sanadkii 1782 oo laga aasaasay Madrid, bangiga dhexe ee Spain wuxuu hada xubin ka yahay Nidaamka Yurub ee
Nidaamka Iskuulka iyo Waxbarashada ee Isbaanishka
February 27, 2020 Antika Kumari dugsiga, Spain
Waxbarshada Isbaanishka Nidaamka iskuulka iyo waxbarashada dalka Spain ayaa si aad ah loo wanaajiyey 25-kii sano ee la soo dhaafay iyadoo la kordhiyay kharashaadka ku baxa iyo dib-u-habeeynta waxbarashada. Sahankii ugu dambeeyay ee PISA ee heerarkii waxbarasho ee 15-jirad oo laga keenay wadamo badan iyo dhaqaala ayaa muujisay taas
Tarifa ma tahay meesha loo dalxiis tago ee weyn sida ay rabaan inaynu rumeysanno?
February 1, 2020 Demi fikradaha, Spain
Tarifa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu sareysa ee dalxiiska loogu talagalay cayaaraha dabaysha. Waa goob, aagga koonfur-bari ee Spain, waxay u dhexeysa laba badood, Badda Dhexe iyo Badweynta Atlantik, waxay ku habboon tahay kitesurfing. Labada Badoodba way isku dhalaaleen,
Caafimaadka Isbaanishka Hel Daaweynta Ugu Fiican halkan !!
November 7, 2019 Karuna Chandna caafimaadka, Spain
Xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada Spain. Si aad ugu qalanto adeegyada bilaashka ah ee xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada Isbaanishka, waa inaad ka diiwaan gashan tahay nidaamka daryeelka caafimaadka gobolka, aad leedahay caymis daryeel caafimaad oo gaar loo leeyahay, haysato EHIC (Kaarka Caymiska Caafimaadka ee Yurub) ama